Amacala kaZuma adle imali elinganiselwa ku-R24m - Masutha | News24
Amacala kaZuma adle imali elinganiselwa ku-R24m - Masutha
Lowo owabe engumengameli kuleli uJacob Zuma usebenzise imali yabakhokhi bentela elinganiselwa okungenani ku-R24m kwezomthetho ngesikhathi ephethe, kusho uNgqongqshe wezokubuLungiswa uMichael Masutha ephendula umbuzo ePhalamende.
Ngonyaka owedlule ePhalamende, uZuma wenqaba ukuphendula imibuzo mayelana nemali esetshenziswa ekuquleni amacala ayebhekene nawo, watshela iNational Council of Provinces ukuthi lokho "kakusiyo inkinga yakhe".
Umholi weFreedom Front Plus uPieter Groenewald ubuze uMasutha ukuthi ngabe "uMnyango wakhe ikhona imali owayikhokha kusukela ngo-2009 emacaleni kalowo owayengumengameli uJacob Zuma", nokuthi kwaba yimalini.
UMasutha ubale amacala amahlanu, abiza abakhokhi bentela u-R 24 240 201,54.
"Njengoba uZuma enganqobanga nelilodwa icala kulawa, lokho kusho ukuthi kwamoshwa imali yabakhokhi bentela kuzanywa izindlela zokumvikela," kusho uGroenewald esitatimendeni.
Ngokolwazi lukaGroenewald, ecaleni lapho iNational Prosecuting Authority yathola incwadi egunyaza ukuba iseshe amahhovisi akwaThint/Thales, kanjalo nencwadi ebhekiswe ezikhulwini zaseMauritius ukuba ithole imininingwane, yaphikiswa nguZuma nokwabiza u-R15.3m.
"Leli cala layiswa eNkantolo yoMthethosisekelo kanti uZuma wakhala ngaphansi kulo. Yilona kuphela elaphothulwa," esho.
Ecaleni lapho uZuma afaka imibuzo ngamandla oMvikeli woMphakathi ngokuhambisana noMthethosisekelo, ngemuva kokuthi lowo owayenguMvikeli woMphakathi uThuli Madonsela akhipha umbiko ngeNkandla, uZuma wasebenzisa abameli abayisihlanu.
Uthe ecaleni lapho uZuma azama khona ukuvimbela uMadonsela ukuthi adedele umbiko owaba ngumndabamlonyeni weState Capture, elabiza u-R2.5m, uZuma wasebenzisa abameli abathathu.
No jackpot winners in Sunday's Daily Lotto 7 minutes ago Click here for the full list of lottery results